75W ETL Na-acha ọkụ ọkụ na-ekpuchi China Manufacturer
Nkọwa:Ebube ndị na-ekpuchi ọkụ maka ebe gas,Ebube ndị a na-ekpuchi,Enwu ọkụ na-esi n'èzí
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè > 75W ETL Na-acha ọkụ ọkụ na-ekpuchi
75W Na-enwu Mgbapụ maka Ọdụ gas na- enyepụta mmepụta ọkụ ọkụ 8250lm site 110lm / w. A na-ewuli elu nke ọkụ ndị dị na Led Canopy Lines, ọ ga-eju gị anya na ókè mpaghara ebe a dị. Ogo kachasị mma anyị nwere ike ịgbanwu ọkụ edepụtara maka awa 50,000. Nnukwu quanlity na-acha ọkụ, UL mma LED ọkwọ ụgbọala na elu mma aluminum lampshade ihe na-enye zuru ebe dị mma maka okpomọkụ dissipation. Dị mfe ịwụnye na ọnụ ala, belata ụgwọ kọmputa gị ruo na 85%, 250W HPS / HID replace with 75W.
Ime ụlọ anyị na n'èzí na-eme ka ìhè mkpuchi dị jụụ dị mma iji mee ka ọkụ ọkụ ụgbọala, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ụgbọala, ọkụ ụlọ ahịa, na ebe ndị ọzọ ọkụ ọkụ ma ọ bụ nnukwu mmiri ọkụ. Nke a mere ka ihe ndị a na-eburu ihe ọ bụla ejiri afọ ise anyị kpuchie akwụkwọ ikike. Anyị kwenyere na ị nwere ike nweta ihe ịchọrọ na ahụmahụ ịzụ ahịa obi ụtọ.
Ebube ndị na-ekpuchi ọkụ maka ebe gas Ebube ndị a na-ekpuchi Enwu ọkụ na-esi n'èzí Ebe a na-ekpuchi ọkụ na gas Mgba ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas Ebube na-ekpuchi ọkụ akwa High Bay 200w Ebube na-ekpuchi ọkụ Mgbapụ ndị na-ahụ maka ebe gas